Iingcebiso zokuthenga kwi-New Age Friends kunye neNtsapho
Izinketho zokuthengwa kwempilo epheleleyo, umsebenzi wamandla okanye umthandi wokuvumisa
Unomhlobo okanye ilungu lentsapho eliphilisa ngokupheleleyo okanye elitsha lobomi. Awuqinisekanga nantoni na ukuba uyenze, kodwa uyazi ukuba bayakuxabisa ingcamango yokuba ubeka ingqalelo kwiminqweno yabo.
Abanye abantu abalandela indlela ekhokelekileyo yokomoya, ebomini bangabakho kwi- yoga baze bacamngce. Abanye banokuthanda umsebenzi wamandla, ukuhlaziya kwi-chakras, auras, kunye ne-reiki unyango.
Kanye njengoko kukho ezininzi iintlobo zabantu, zininzi iintlobo zeendlela zokuzaliseka kwihlabathi elitsha. Abanye abantu bathanda inkwenkwezi, i-tarot kwaye bayangena kwii-oracle, i-crystals, kunye nokuvumisa. Abanye banokuthandana nokuxhamla kwendalo, ukuphumula, ukusilalisa, iioli eziyimfuneko, isiqhumiso kunye namakhandlela.
Kungakhathaliseki ukuba ngumntu, kungakhathaliseki ukuba uhlahlo lwabiwo-mali; Ummandla omtsha wobudala unikezela ezininzi izinto zokukhetha izipho kunye neengcali. Ngokomzekelo, kukho iipuzzles eziphambili zeengqondo, zokuphulukisa kunye nokuvuselela, amakhadi e-tarot kunye nezinye izinto ezisendlwini eziqhelekileyo, njengabahlambululi bomoya okanye iimpawu zamanzi ezinokuthoba kunye nemithombo enokuyenza nayiphi na ikhaya ivakale imema kwaye igcwele i-zen.
Isipho esifakwe kwiPhepha eliMnyama. Justin Bailie / Getty Izithombe
Ngaphambi kokuba uthenge into, cinga ngomntu. Awuyi kuqonda ihlabathi elitsha, kodwa ungabutha izinto ezimbalwa malunga nomntu. Ngaba umntu wakho okhethekileyo uthanda ukugqoka iingubo? Ngaba loo mntu uhlala egqoka iphunga okanye iphunga xa ubona?
Yintoni enye into ebomini babo yobutsha obaphulaphulayo ngokuphindaphindiweyo? Njengegama elingundoqo, ngaba kukhwenkwezi, amandla, okanye ukuphumla? La magama angundoqo anesikhokelo sakho kumhlobo wolutsha olutsha olukhethekileyo umntu onalo.
Qwalasela ezinye zeengcebiso ezingezantsi. Ngamnye unikeza iingcebiso kunye neengcebiso zokuthengisa malunga nendlela yokuhamba ngokukhetha izipho kubahlobo bakho kunye nabamalungu entsapho abanengqondo.
I-Soul Mate iThempelini Izipho Ezizimeleyo
Ubudala butsha Ukuthenga kwiBhajethi
Uhlahlo lwabiwo-mali ngexesha leeholide okanye nayiphi na ixesha yindlela ephilileyo yokusingatha iimali zakho. Kukho izinto ezininzi zokukhetha indlela yokuhlala kwisabelo-mali kwaye ungaphuli iibhanki ngeziphakamiso zesipho.
Izipho ezinobungozi ngaphantsi kwe $ 50.00
Izipho ezinobungozi ngaphantsi kwe $ 100.00
Imidlalo yeMidlalo kunye neeThuluzi
Iimveliso ezizimeleyo zokuzinakekela
Ukuzinakekela kubalulekile kwimpilo yakho yonke, kwaye ngokunyanisekileyo, nabani na. Unokuthenga iindawo zokunyamekela nokuzikhusela. Khawucinge ngesipho esisekhaya esisinikiweyo esibandakanya amayeza okubandayo kunye namagciwane okanye amafutha abalulekileyo aneempiliso zokuphilisa.
Okanye, mhlawumbi umntu wakho okhethekileyo uthanda ukuhlala phezulu kwimizila emitsha yamandulo, qwa lasela umagazini we-wellness magazine.
Ukuba imali ayikho into okanye uceba ukugqithisa ngokuthe kancinci kwixesha lakho elitsha le-aficionado, jonga kwiseseshoni yangasese kunye nomsebenzi wezempilo opheleleyo onokunika i-reiki, ukusilalisa okanye iseshoni yokumanyula, ukulungelelanisa i-chakra, i-auras ecocekileyo, uyilo olubanzi iitshathi zokuzalwa, okanye ukufundwa kwekhadi le-tarot.
I-Holistic Health Kit Imfuneko
I zixhobo zo kucamngca
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: I-Portare
Izipho eziMagidi Ezilishumi zokuba zenze iYule
Inkcazo kunye neMimiselo yoLuntu loLuntu kwi-Psychology